Lionel Messi Oo Dowladdiisa Argentina U Dhigtay ‘Arrooskii Qarniga’ + Sawiraddii Xafladda
HomeWararka MaantaLionel Messi Oo Dowladdiisa Argentina U Dhigtay ‘Arrooskii Qarniga’ + Sawiraddii Xafladda
Xiddiga xulka Argentine, Lionel Messi ayaa kula aqal galay gabadh ay is jeclaayeen ilaa carruurnimaddii, magaalada uu ku dhashay, xaflad aroos lagu sifeeyey inay ahayd “arrooskii qarniga”.
Munaasibad qiimo badan oo ay soo qaban qaabisay dowladdu, ayaa loogu aroosay, carruus Messi, oo 30 jir ah, iyo Carruusad, Antonela Roccuzzo, oo 29 jir ah, taas oo ka dhacday, huteel kuwa raaxada ah oo ku yaala magaalada Rosario.
Xiddigaha kubadda cagta iyo shaqsiyaad kale oo caan ah ayaa kamid ah, marti tiradoodu 260 qof dhamayd oo xaflada lagu soo casuumay, halka boqolaal ciidanka amaanka ahi ay ilaalada munaasibada ka qayb galayeen.
Messi, weeraryahanka xulka Argentina iyo naadiga Barcelona, wuxuu ku bartay Roccuzzo oo ku calmaday ka hor intii aanu u soo guurin wadanka Spain isagoo 13 jir ah.
Waxaa kamid ah martida, xafladda arooska Messi fiidnimadii Jimcaha kala qayb gashay, ciyaaryahanada ay Barcelona u wada ciyaaraan ee Luis Suárez, Neymar, Gerard Piqué iyo xaaskiisa, fanaanada weyn ee reer Colombia, Shakira. Marti badan oo kale ayaa diyaarado khaas ah ku tagay magaalada Rosario.
Martida kale ee ka soo qayb gashay waxaa laga xusi karaa, Samuel Eto’o, Fabregas, Javier Mascherano, Lavezzi, Puyol , Xavi iyo Angel Di Maria.
Wargeyska Argentina ka soo baxa ee Clarín newspaper ayaa xafladda ku tilmaamay “Arooskii sanadka” iyo “Arooskii Qarniga”.
Intii aanay xafladu bilaabanin maalinimadii, shacab aad u tiro badan ayaa isugu yimid garoonka diyaaradaha magaalada, si ay indhohooda ugu arkaan shaqsiyaadka caanka ah ee arooska lagu soo marti qaaday.
Shirkad ammaan oo kuwa gaarka loo leeyahay ah, ayaa sugaysay ammaanka gudaha Huteelka xafladdu ka socotay.
Ilaa 150 saxafi ayaa lagu soo marti qaaday munaasibada, kuwaas oo loo diyaariyey goob u gaar ah warfidiyeenada, laakiin aan la siin ogolaansho dhamaystiran oo ay ku gaaf wareegi karaan guud ahaan barxadda arroosku ka socday, sidaasna waxaa xaqiijiyey, kooxda qaban qaabada.
Former Barcelona players Xavi Alonso, Cesc Fabregas and Carles Puyol and their wives pose on a red carpet upon arrival to attend Argentine football star Lionel Messi and Antonella Roccuzzo’s wedding in Rosario, Santa Fe province, Argentina on June 30, 2017.
Footballers and celebrities including pop singer Shakira gathered for the “wedding of the century” in Lionel Messi’s Argentine hometown as the Barcelona superstar prepared to marry his childhood sweetheart Antonella Roccuzzo. / AFP PHOTO / EITAN ABRAMOVICHEITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images
1,417 kg Oo Daroogadda Kookeyn Lagu Dahaadhay Sawirka Messi Ah Oo La Qabtay
Iniesta: Baaskii Messi inuu Neymar Kuwaday Ayaa Laga Yaabaa